"နိုင်၊ လွတ်၊ လုံ" ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြီးက Cyber Crime ကျူးလွန်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေသလား? | Online Service Center Myanmar -->
"နိုင်၊ လွတ်၊ လုံ" ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြီးက Cyber Crime ကျူးလွန်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေသလား?
Account တွေ Hack ခံရတယ်။ Blackmail တွေ အလုပ်ခံရတယ်။ ကိုယ့်နာမည်၊ ကိုယ့်ပုံတွေနဲ့ Personal Attack တွေလုပ်ခံရတယ်။ ငွေတွေအလိမ်ခံရတယ်။ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဖြစ်ကြရတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျဆင်းရတယ်။
အဲ့လိုတွေဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် သာမန်ပြည်သူတွေအတွက် ထိရောက်စွာကာကွယ်ပေး၊ ကူညီပေး၊ စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေမရှိသေးဘူး။
Cyber Crime တွေဖြစ်လာလို့ အကူအညီရလိုရငြား ရဲစခန်းတွေမှာအမှုသွားဖွင့်ရင် ငြင်းလွှတ်တာနဲ့၊ ဖွင့်မနေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်တာပဲအဖတ်တယ်မယ်ပြောတာနဲ့၊ အမှုတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါရဲ့ ဘာမှဆက်ဖြစ်မလာတော့တာနဲ့၊ အဲ့လိုတွေနဲ့ပဲ ဘာမှထူးခြားမလာတဲ့အဆုံးသတ်တွေနဲ့ စိတ်ပျက်စရာအနေအထားပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ( ရဲစခန်းကအမှုဖွင့်မပေးရင်ဘာလုပ်ကြမလဲ ??? )
တကယ်ဆို ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်လို့၊ အရေးယူအပြစ်ပေးလို့၊ ရနိုင်ပါလျက်နဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကရှိနေတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျူးလွန်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ဥပဒေက "နိုင်၊ လွတ်၊ လုံ" ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြီးပဲ။
ပြည်သူတွေ အရေးရယ်အကြောင်းရယ်ဖြစ်ချိန် အဲ့ဒီ "နိုင်၊ လွတ်၊ လုံ" ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြီးကာနေတာနဲ့ ဘာဆိုဘာမှလုပ်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်း အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုင်ပေါက်ပြီး ဘာမှလုပ်မပေးကြတော့ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတွေနဲ့ ခွေးမသားသမီးတွေက လူတွေကိုဒုက္ခပေးပြီး သူဌေးတောင်ဖြစ်နေကြပြီ။
ဒီနေရာမှာ ပြည်သူတွေမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေ Cyber Crime နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ရင် ချက်ချင်း Action ယူပြီးဖြေရှင်းပေးတယ်။
ဥပမာ - ဒေါ်စု၊ သမ္မတ၊ ကာချုပ်၊ ဝန်ကြီး၊ တွေကိုသာ Online ပေါ်ကနေ Personal attack လေးပဲလုပ်ကြည့်၊ ချက်ချင်းအရေးယူဖို့ ချက်ချင်းခြေရာခံ၊ ချက်ချင်းတရားခံဖမ်းပါ ထလုပ်တယ်။
အဓိကမေးချင်တာက နိုင်ငံတနိုင်ငံက လူတိုင်းအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေတွေက ကျောသားရင်သားခွဲခြားထားပြီး မျက်နှာကြီးရာပဲ ဟင်းဖတ်ပါတဲ့အနေအထားမျိုးလားဆိုတာပါပဲ။
ပေါ်တင်ပြောရရင် ပြည်သူတွေအတွက်မဟုတ်ပဲ အကြီးအကဲတွေအတွက်ပဲ အခွင့်ထူးခံလို့ရတာမျိုးတွေများလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။
ဘယ်တော့များမှ တသားထဲကျတဲ့ တန်းတူညီတူအခွင့်အရေးမျိုးတွေရှိလာမှာပါလိမ့်။ 😏😏😏
လက်ရှိတော့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဘက်က တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ကိုယ်ချင်းစာမှု၊ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ကျေပွန်စွာလုပ်ဆောင်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးနေကြတယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်။ 🙄🙄🙄
Video Credit: Z Media
#Facebook #FacebookAccount #FacebookAccountHack #Hack #CyberCrime #Blackmail #PersonalAttack
Facebook Knowledge Sharing Video